ဖလိုရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အောက်ဆီဂျင် ← ဖလိုရင်း → နီယွန်
André-Marie Ampère (၁၈၁၀)
အတည်ငြိမ်ဆုံး ဖလိုရင်း၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
trace 109.77 min β+ (96.9%) 0.634 18O
100% is stable with 10 neutrons
ဖလိုရင်း (Fluorine- ဓာတုသင်္ကေတ F) သည် ဒြပ်စင်အားလုံး၏ အီလက်ထရွန် အနုတ်လက္ခဏာနှင့် ဓာတုဓာတ်ပြုနိုင်မှု အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ စိမ်းဝါရောင် နှင့် Gaseous halogen ပေါင်းစည်းအား (၁) ရှိ သည်။ ဖလိုရင်းသည် Noble gases ဖြစ်သော Krypton, xenon ,radon နှင့် အခြားသော ဒြပ်စင်များနှင့် ဓာတ်ပေါင်းများ ဖြစ်ရန် လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင် ဖန်၊ သတ္တု၊ ရေ နှင့်အခြားသော အရာဝတ္ထုများနှင့်လည်း ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ဖလိုရင်း ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် မီးတောက်ကို ပိုမို တောက်စေနိုင်သည်။ အပေါင်းလက္ခဏာ ရှိသော counterpart အချို့နှင့် ဖလိုရိုက် ပေါင်းစပ်၍ ဖလိုရင်း ဓာတ်ပေါင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၂ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရှိရမှုအခြေအနေ
အက်တမ် အခြေအနေနှင့် မော်လီကျူး အခြေအနေတွင် ရှိကြသော ဖလိုရင်းများကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာ၌ ပလပ်စတစ် ပုံဖော်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ Flat panel နှင့် MEMs ထုတ်လုပ် ပြသရာတွင်လည်း ကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယူရေနီယမ် ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဖလိုရင်းကို ဖယ်ယွန် (ferron) ကဲ့သို့ သော်လည်းကောင်း၊ ဟေလွန် (halon) အတွင်းရှိ တတ်ဖလွန် (teflon) ကဲ့သို့သော်လည်းကောင်း အရာဝတ္ထု ပွတ်တိုက်ခြင်းနိယာမ အရ တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖလိုရင်းသတ္တုကို နှစ်အလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၄သန်း မတ်ထရစ် တန် နီးပါရှိပြီး၊ အရန်သတ္တု မှာသန်း ၁၂၀ မတ်ထရစ်တန် ခန့်ရှှိခဲ့သည်။ အဓိကသတ္တုတွင်း နေရာများမှာ တရုတ်၊ မကဆီကို နှင့်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။ ဖလိုရင်းကို သဘာဝ တွင် ရွှံစေး၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ကျောက်တုံးတို့ တွင်တွေ့နိုင်သည် ။ ဖလိုရင်းသည် လေထဲတွင်ပျံနှံနေပြီး အနည်ထိုင်လေ့ရှိသည်။ ဖလိုရင်းသည် မြေဆီလွှာတွင် ခန့်မှန်းခြေ ၃၃၀ ပီပီအမ် (ppm)ခန့်ပါဝင်ပြီး ၁၄၀ မှ ၄၀၀ ပီပီအမ်(ppm)ထိအစီအရီ ရှိနေတတ်သည်။ အချို့မြေဆီလွှာများတွင် ဖလိုရင်းကို ၁၀၀၀ ပီပီအမ် (ppm) ခန်တွေ့ရှိရပြီး မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုကို ၃၅၀၀ ပီပီအမ် (ppm) တွင်တွေ့ရှိရသည်။ စက်ရုံတွေတွင် ဟိုက်ထရိုဂျင်ဖလိုရိုက် ကိုလေထဲမှ ဖယ်ထုတ်ပြီး အပူနှင့်အလင်းကိုထုတ်လုတ်နိုင်သည်။
သဘာဝတွင်ရှိသော ဖလိုရင်း ပမာဏအနည်းငယ်သည် ရေ၊ လေ၊ အပင် နှင့် တိရစ္ဆာန်များတွင် တွေ့ရသည်။ လူသားများအတွက် zysteကျိုးရလဒ်များမှာ အစားအစာ၊ သောက်သုံးရေ နှင့် အသက်ရှူသည့် လေများကို ဖလိုရင်း ဖြတ်၍ export ဖြစ်စေသည်။ ဖလိုရင်းကို အရေအတွက် အနည်းငယ်ရှိသော အစားအစာများ ထဲများတွင် တွေ့နိုင်ပြီး၊ အရေအတွက်များပြားသော အခွံမာရှိသည့် စားကောင်းသည့် ရေသတ္တဝါ နှင့် လက်ဖက်ရည်များတွင် ဖလိုရင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဖလိုရင်းသည် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီများ ထိန်းသိမ်းရာတွင် အဓိကလိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ဖလိုရင်းကို တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် သွားတိုက်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုမည် ဆိုပါက သွားယို့ယွင်းပျက်စီးမှုမှ ကာကွယိနိုင်သည်။ ပြင်းအား အရမ်းများပါက ဖလိုရင်း ဓာတ်ငွေ့သည် သေစေနိုင်သောကြောင့် ၎င်းဓာတ်ငွေ့သည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ပြင်းအားနည်းလျှင် မျက်လုံးနှင့် နှာခေါင်းတို့ကို ကျိန်းစပ်စေနိုင်သည်။
ဖလိုရင်းသည် မြေဆီလွှာများတွင် တည်ရှိပြီးအပင်များတွင် စုပြုံနေတတ်သည်။ မြေဆီလွှာတွင် တွေ့ရသော ဖလိုရင်းအမျိုးအစား၊ ပမာဏနှင့် မြေဆီလွှာ အမျိုးအစား၊ အပင်အမျိုးအစားများ အပေါ်မှုတည်ပြီး ပမာဏအနည်းအများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ တိရစ္ဆာန်များသည် ဖလိုရင်းရှိသောအပင်များကို စားသုံးလိုက်သောအခါတွင် ၎င်းတို့၏ ခန္ဒာကိုယ်ထဲတွင် ပြင်းအားကြီးမားသော ဖလိုရင်းများကို စုဆောင်းမိလာနိုင်သည်။ အရိုးထဲတွင် ဖလိုရင်းကို ပထမဆုံး စုဆောင်းမိလာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖလိုရင်းပြင်းအားများသည် များပြားလာပြီး အရိုးများ၊ သွားများကို ပျက်စီးသည် ကိုတွေ့ရသည်။
စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဖလိုရင်းရှိသည့် ဖလိုရိုက်မင်နာရယ် ပုံဆောင်ခဲများ
တွေ့ရှိသူ ဟန်ရီ မွိုင့်စန်
ဖလိုရင်းထုတ်လုပ်သည့် F2ဓာတုဗေဒ လိမိတက်၊ ဖလိုရင်းဆဲ အခန်း၊ ပဲရစ္စတန်၊ ယူကေ
အိုင်အိုဒင်း ဟပ်တာဖလိုရိုက်နှင့် ရေနီယမ် ဟပ်တာဖလိုရိုက် အသစ်၊
ခန္ဓာပြည့် စမ်းသပ်မှုတွင် ဖလိုရင်း ၁၈ ကို အသုံးပြုသည်။
ဆိုဒီယမ် ဖလိုရာအက်စ်တက် တွင် သဘာအလျောက် ဖြစ်ပေါ်နေသော အဆိပ်ကို အချိုအပင်များတွင် တွေ့ရ
အပူချိန်နည်းသော အခြေအနေရှိ ဖလိုရင်းငွေ့ရည်
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ Jaccaud et al. 2000, p. 381.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ Haynes 2011, p. 4.121.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Jaccaud et al. 2000, p. 382.
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Compressed Gas Association 1999, p. 365.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖလိုရင်း&oldid=722709" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။